ဈေးကွက်ထဲရှိ တချို့ရေမွှေးတွေ ဘာကြောင့် ဈေးတအားကြီးရတာလဲ
ဈေးကွက်ထဲက တချို့ရေမွှေးတွေ ဘာကြောင့် ဈေးတအားကြီးရတာလဲ
8 Oct 2018 . 5:00 PM
ရေမွှေး Crazy တွေဟာ ရေမွှေးကောင်တာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ အနံ့လေးစမ်းမသုံးကြည့်ရရင် မနေနိုင်လောက်အောင် စွဲလန်းတတ်ကြပါတယ်။ အနံ့တွေကို စမ်းသုံးကြည့်ရင်းနဲ့ ထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့ရတာကတော့ တချို့ရေမွှေးတွေက ကိုယ်မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ဈေးတွေ အလွန်မြောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မယုံနိုင်အောင် ဈေးတွေအလွန်မြင့်မားနေတဲ့အတွက် ရေမွေးတစ်ပုလင်း အဲ့ဒီလောက် တန်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး ယုံမှားသံသယ ဖြစ်မိကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် တကယ့် Luxury ကျတဲ့ရေမွှေးတွေက ဒေါ်လာရာနဲ့ချီတဲ့ တန်ကြေးတွေကနေ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ တန်ကြေးတွေအထိ ရှိကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် Luxury ရေမွှေးတွေရဲ့ တန်ကြေးတွေက အရမ်ျးေဈးကြီးရတာလဲဆိုပြီး ရေမွှေးချစ်သူပီပီ မစပ်စုရ မနေနိုင် စပ်စုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ …….
Luxury ရေမွှေးတွေ ဈေးမြောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယေဘုယျဆန်ဆန် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီရေမွှေးတွေဟာ Brand ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ပါဝင်တဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေ အလွန်ရှားပါးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်တွေရဲ့ ပွင့်ချပ်ကနေ အဆီအဖြစ် ထုတ်ယူတာ၊ သစ်ပင် (သို့) အမြစ်တွေကနေထုတ်ယူတာကနေ ရရှိလာတဲ့ သဘာဝရှားပါး အမွှေးနံ့စစ်စစ်တွေနဲ့ ရေမွှေး ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ တချို့ရေမွှေးတွေမှာတော့ ကတိုးကောင် အဖိုကနေ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အမွှေးနံ့သာနဲ့လည်း ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အပြန်အလှန်အနေနဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ ရေမွှေးတွေ ရှိသလိုမျိုး ဈေးပေါတဲ့ ရေမွှေးတွေလည်း ဈေးကွက်ထဲမှာ အမြောက်အမြား တွေ့ရပါတယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့ ရေမွှေးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ အလွယ်တကူ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပြီး တချို့တွေက ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ အမွှေးနံ့တုတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ဈေးသက်သာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဈေးကြီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း သုံးခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းအရင်းသုံးခုကတော့……..
တချို့ရေမွှေးတွေမှာ ရှားပါးပန်းမျိုးစိတ်တွေရဲ့ ပွင့်ဖတ်တွေနဲ့ အမြစ်တွေကနေ ပေါင်းခံထုတ်ယူရရှိတဲ့ အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Tuberose နဲ့ Jasmine နှစ်မျိုးလုံးက ဈေးကြီးတဲ့ အဆီအနှစ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေလိုက်ပြီး တုပလုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့ အမွှေးနံ့တွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဈေးအလွန်ကြီးပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ၁၉၃၀ ခုနစ်ထုတ် ဈေးအကြီးဆုံးရေမွှေးစာရင်းဝင် Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jean Patou Joy Perfume တစ်ပုလင်းရရှိဖို့အတွက်ဆို Jasmine ပန်းပွင့်ပေါင်း ၁၀,၆၀၀ ပွင့်နဲ့ Dozen Rose ပေါင်း ၂၈ ပွင့်ကနေ ထုတ်ယူရရှိပါတယ်လို့ Fragrantica ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ Jasmine နဲ့ Rose အဆီအနှစ်တွေကို အမျိုးသမီးရေမွှေးတွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ကတိုးကနေရရှိတဲ့ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်အဆီအနှစ်တွေကိုတော့ အမျိုးသား Eau De Cologne ရေမွှေးတွေမှာ အများဆုံးသုံးတာတွေ့ရပါတယ်။
ရေမွှေးပုလင်းတွေမှာ Perfum ၊ EDP နဲ့ EDT ဆိုပြီးရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုရေးသားထားတာက အဆီပါဝင်မှုနှုန်းကို ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။Perfume မှာ ရေမွှေးအဆီအနှစ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း (သို့) ၁၅ ရာခုိုင်နှုန်းထက် ပိုများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ Eau De Parfum (EDP) မှာတော့ ရေမွှေးအဆီအနှစ် ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ပါတယ်။ Eau De Toilette (EDT) မှာတော့ အမွှေးအဆီအနှစ် ငါးရာခိုင်နှုန်းကနေ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ပါတယ်။
(၂) Marketing ဗျူဟာ
ရေမွှေးတွေ ဈေးကြီးရတဲ့ နောက်ထပ်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကတော့ ကုမ္ပဏီတွေက ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရင်နှီးမြှုပ်နှံပြီး ကြော်ငြာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ရေမွှေးတွေကို နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေနဲ့ Influencer တွေကို ငွေကြေးအမြောက်အမြားပေးသုံးခိုင်းကာ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး ကြော်ငြာကြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
David Beckham and Perfume
တချို့ရေမွှေးတွေကိုတော့ အကန့်အသတ်နည်းနည်းနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးတွေကို အမြင့်ကြီး သတ်မှတ်ပြီး ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ဒီရေမွှေးတွေဟာ ကောင်းမွန်တယ်ထင်ပြီး လူတွေကအလုအယက် ဝယ်ယူကြပါတယ်။
ရေမွှေးရောင်းချသူတွေဟာ ရေမွှေးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ အမိုက်စားထုပ်ပိုးမှုပြုလုပ်ထားရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ ခြေကုပ်ယူနိုင်ပြီး ဈေးတင်ရောင်းချလို့ရကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကို အသုံးချပြီး ထုပ်ပိုးမှုအပိုင်းမှာ ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ အသေအချာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Baccarat Crystal Bottle ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ရေမွှေးဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ရေမွှေးအဖြစ် စာရင်းဝင်ဖူးပါတယ်။
Baccarat ဟာ French အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်မှာ အကောင်းဆုံး Crystal တွေ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ တချိူ့သော ရေမွှေးပုလင်းတွေမှာ စိန်တွေနဲ့ ရွှေအစိုင်အခဲတွေ မြှုပ်နှံထားတယ်လို့လည်း ကြားသိရပါတယ်။
ဈေးကှကျထဲက တခြို့ရမှေေးတှေ ဘာကွောငျ့ ဈေးတအားကွီးရတာလဲ
ရမှေေး Crazy တှဟော ရမှေေးကောငျတာတှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ အနံ့လေးစမျးမသုံးကွညျ့ရရငျ မနနေိုငျလောကျအောငျ စှဲလနျးတတျကွပါတယျ။ အနံ့တှကေို စမျးသုံးကွညျ့ရငျးနဲ့ ထူးခွားတာတဈခုတှရေ့တာကတော့ တခြို့ရမှေေးတှကေ ကိုယျမထငျမှတျထားလောကျအောငျ ဈေးတှေ အလှနျမွောကျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ မယုံနိုငျအောငျ ဈေးတှအေလှနျမွငျ့မားနတေဲ့အတှကျ ရမှေေးတဈပုလငျး အဲ့ဒီလောကျ တနျတယျဆိုတာ ဟုတျကောဟုတျရဲ့လားဆိုပွီး ယုံမှားသံသယ ဖွဈမိကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ တကယျ့ Luxury ကတြဲ့ရမှေေးတှကေ ဒျေါလာရာနဲ့ခြီတဲ့ တနျကွေးတှကေနေ ထောငျနဲ့ခြီတဲ့ တနျကွေးတှအေထိ ရှိကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ Luxury ရမှေေးတှရေဲ့ တနျကွေးတှကေ အရမျးဈြေးကွီးရတာလဲဆိုပွီး ရမှေေးခဈြသူပီပီ မစပျစုရ မနနေိုငျ စပျစုကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ …….
Luxury ရမှေေးတှေ ဈေးမွောကျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ယဘေုယဆြနျဆနျ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ အဲဒီရမှေေးတှဟော Brand ကွောငျ့မဟုတျဘဲ ပါဝငျတဲ့ ကုနျကွမျးပစ်စညျးတှေ အလှနျရှားပါးတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ပနျးပှငျ့တှရေဲ့ ပှငျ့ခပျြကနေ အဆီအဖွဈ ထုတျယူတာ၊ သဈပငျ (သို့) အမွဈတှကေနထေုတျယူတာကနေ ရရှိလာတဲ့ သဘာဝရှားပါး အမှေးနံ့စဈစဈတှနေဲ့ ရမှေေး ပွုလုပျကွပါတယျ။ တခြို့ရမှေေးတှမှောတော့ ကတိုးကောငျ အဖိုကနေ ထုတျယူရရှိတဲ့ အမှေးနံ့သာနဲ့လညျး ပွုလုပျကွပါတယျ။ အပွနျအလှနျအနနေဲ့ ဈေးကွီးတဲ့ ရမှေေးတှေ ရှိသလိုမြိုး ဈေးပေါတဲ့ ရမှေေးတှလေညျး ဈေးကှကျထဲမှာ အမွောကျအမွား တှရေ့ပါတယျ။ ဈေးသကျသာတဲ့ ရမှေေးတှမှော ပါဝငျတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှဟော အလှယျတကူ ထုတျယူရရှိတဲ့ အရာတှဖွေဈပွီး တခြို့တှကေ ဓာတျခှဲခနျးမှာ ဖနျတီးပွုလုပျထားတဲ့ အမှေးနံ့တုတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ ဈေးသကျသာရခွငျး ဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျဈေးကွီးရတဲ့ အကွောငျးအရငျး သုံးခုလညျး ရှိပါသေးတယျ။ အဲ့ဒီအကွောငျးအရငျးသုံးခုကတော့……..
တခြို့ရမှေေးတှမှော ရှားပါးပနျးမြိုးစိတျတှရေဲ့ ပှငျ့ဖတျတှနေဲ့ အမွဈတှကေနေ ပေါငျးခံထုတျယူရရှိတဲ့ အဆီအနှဈတှနေဲ့ ပွုလုပျထားတာတှရေ့ပါတယျ။ Tuberose နဲ့ Jasmine နှဈမြိုးလုံးက ဈေးကွီးတဲ့ အဆီအနှဈတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ လူတှလေိုကျပွီး တုပလုပျဖို့ ခဲယဉျးတဲ့ အမှေးနံ့တှေ ဖွဈခဲ့ရငျလညျး ဈေးအလှနျကွီးပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ ၁၉၃၀ ခုနဈထုတျ ဈေးအကွီးဆုံးရမှေေးစာရငျးဝငျ Brand တဈခုဖွဈတဲ့ Jean Patou Joy Perfume တဈပုလငျးရရှိဖို့အတှကျဆို Jasmine ပနျးပှငျ့ပေါငျး ၁၀,၆၀၀ ပှငျ့နဲ့ Dozen Rose ပေါငျး ၂၈ ပှငျ့ကနေ ထုတျယူရရှိပါတယျလို့ Fragrantica ဖျောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။
ဈေးနှုနျးကွီးမွငျ့တဲ့ Jasmine နဲ့ Rose အဆီအနှဈတှကေို အမြိုးသမီးရမှေေးတှမှော အမြားဆုံးအသုံးပွုလရှေိ့ပွီး ကတိုးကနရေရှိတဲ့ ဈေးနှုနျးကွီးမွငျ့အဆီအနှဈတှကေိုတော့ အမြိုးသား Eau De Cologne ရမှေေးတှမှော အမြားဆုံးသုံးတာတှရေ့ပါတယျ။
ရမှေေးပုလငျးတှမှော Perfum ၊ EDP နဲ့ EDT ဆိုပွီးရေးသားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီလိုရေးသားထားတာက အဆီပါဝငျမှုနှုနျးကို ဖျောပွတာ ဖွဈပါတယျ။Perfume မှာ ရမှေေးအဆီအနှဈ ၁၅ ရာခိုငျနှုနျး (သို့) ၁၅ ရာခိုငျနှုနျးထကျ ပိုမြားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ Eau De Parfum (EDP) မှာတော့ ရမှေေးအဆီအနှဈ ရှဈရာခိုငျနှုနျးကနေ ၁၅ ရာခိုငျနှုနျးအထိပါဝငျပါတယျ။ Eau De Toilette (EDT) မှာတော့ အမှေးအဆီအနှဈ ငါးရာခိုငျနှုနျးကနေ ရှဈရာခိုငျနှုနျးအထိပါဝငျပါတယျ။
(၂) Marketing ဗြူဟာ
ရမှေေးတှေ ဈေးကွီးရတဲ့ နောကျထပျအကွောငျးအရငျးတဈခုကတော့ ကုမ်ပဏီတှကေ ဒျေါလာသနျးပေါငျးမြားစှာ ရငျနှီးမွှုပျနှံပွီး ကွျောငွာပေးတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ ရမှေေးတှကေို နာမညျကွီးဆယျလီတှနေဲ့ Influencer တှကေို ငှကွေေးအမွောကျအမွားပေးသုံးခိုငျးကာ ကောငျးပါတယျဆိုပွီး ကွျောငွာကွတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။
တခြို့ရမှေေးတှကေိုတော့ အကနျ့အသတျနညျးနညျးနဲ့ထုတျလုပျပွီး ဈေးတှကေို အမွငျ့ကွီး သတျမှတျပွီး ရောငျးခတြဲ့အခါမှာ ဒီရမှေေးတှဟော ကောငျးမှနျတယျထငျပွီး လူတှကေအလုအယကျ ဝယျယူကွပါတယျ။
ရမှေေးရောငျးခသြူတှဟော ရမှေေးကို ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိနဲ့ အမိုကျစားထုပျပိုးမှုပွုလုပျထားရငျ ဈေးကှကျထဲမှာ ခွကေုပျယူနိုငျပွီး ဈေးတငျရောငျးခလြို့ရကွောငျး ကောငျးကောငျးသိပါတယျ။ အဲဒီအခကျြကို အသုံးခပြွီး ထုပျပိုးမှုအပိုငျးမှာ ငှကေုနျကွေးကခြံကာ အသအေခြာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံကွပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ဆိုရငျ Baccarat Crystal Bottle ထဲမှာ ထညျ့ထားတဲ့ ရမှေေးဟာ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ရမှေေးအဖွဈ စာရငျးဝငျဖူးပါတယျ။
Baccarat ဟာ French အခွစေိုကျကုမ်ပဏီဖွဈပွီး ယနခေ့တျေမှာ အကောငျးဆုံး Crystal တှေ ဖနျတီးထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ ကုမ်ပဏီအဖွဈ နာမညျကြျောကွားပါတယျ။ တခြိူ့သော ရမှေေးပုလငျးတှမှော စိနျတှနေဲ့ ရှအေစိုငျအခဲတှေ မွှုပျနှံထားတယျလို့လညျး ကွားသိရပါတယျ။